China EEC L3e Electric Motorcycle abavelisi kunye nababoneleli |Yunlong
Indawo: Knight isithuthuthu sombane linyathelo elilandelayo kwindaleko yesithuthuthu.Ukukhawulezisa okumangalisayo kuyo nayiphi na i-RPM, imigca ebukhali kunye ne-ergonomics yezemidlalo iguqula uhambo lwakho lwemihla ngemihla lube lulonwabo.
Kuhambo lwemihla ngemihla, ukuqhuba umgama omfutshane.Nikeza ukuqhuba ngokukhawuleza nangomsindo, ukuqhuba ngakumbi.
Ubomi bethu akufunekanga buxinge kukuphithizela kwendlela.Zivumele uphumle.
Ubunakho bokubonelela:2000 iiyunithi / ngenyanga
Layisha :Iiyunithi ezili-16 ze-1 * 20'GP, iiyunithi ezingama-32 ze-1 * 40 'HQ.
Umlenze oxhasayo:Umlenze wenkxaso engezantsi, indawo yokupaka ilula kwaye ayifuni.
Ibhetri:Yandisa indawo yebhetri.I-72V86Ah ibhetri ye-lithium, ikhuselekile, uluhlu olude
Inkqubo yeBrake:Phambi nasemva kwediskhi enkulu yesiqhoboshi, ukhuseleko lokugada.
Isihlalo:Yenza isali yesikhumbuzi sememori ejiyileyo ejiyileyo, etyebileyo kwaye ekhululekile, ilingane i-contour yehip, ukhululeke ngakumbi ngaphandle kokudinwa ixesha elide.
Ilula kwaye intle, ipeyinti yomgangatho ophezulu weemoto, uyilo oluphezulu lwangaphambili, i-cushion yokuhlala ekhululekile kubantu ababini, ukuzisa amava okuhamba ngebhayisikile imini yonke.Ukukhupha amanzi ngokukhawuleza, ukubamba okuqinileyo.
Imotor esebenza kakuhle, ukonga umbane gcina ubude obutsha. Amandla aphezulu ombane wokukhuhlana kwemoto, ukudityaniswa kwezixhobo ezahlukeneyo, kunye noyilo lwangaphakathi lokulungela ukufezekisa ukonyuka kweemoto ezikrelekrele, ukunciphisa ilahleko yangoku, amandla emoto anamandla okwandiswa kwamandla, ukusebenza okuphezulu kwenza ukukhwela kukhuseleke. .
Isikrini se-LCD ye-HD, impendulo ekhawulezayo ngaphandle kokutsala isithunzi, umgangatho womfanekiso ocacileyo kunye nozinzile, ukukhanya okunamandla kwe-irradiation kusacacile, iimeko zokuqhuba ngokukhawuleza, ukwenzela ukuba ukuhamba kukhathazeke ngakumbi.
Inkqubo yokunciphisa ukothuka
Inkqubo yokufunxa umothuko wangaphambili nangasemva, akukho loyiko lwesiphithiphithi.Isixa esikhulu sokuhluzwa kwendlela enomngxunya, ukukhwela ibhayisekile kukhululeke ngakumbi.
Uyilo lwesibane esibukhali samehlo amathathu, uluhlu lokukhanyisa lude, ifashoni yamehlo, mawungoyiki ubumnyama.Izibane ezinomsila ezinesitayile.Ukrakra ngakumbi, uqaqambile kwaye uqaqambile, unokubonwa ukusuka kude, uphucula ngokufanelekileyo isalathiso sokhuseleko lokuqhuba ebusuku.
Uyilo lwetaya lokutshayela i-anti-skid, i-brake sensitive, i-grip eyomeleleyo.Yamkela irabha ekumgangatho ophezulu, ukutyeba kuthintela umaleko wocingo lwentsimbi enameva, uyilo lomsele, lubonelela ngamanzi aphuma kakuhle kwitayara.
Inkqubo yokulawula kude
Ulawulo olukude olukrelekrele, yenza imoto yakho ikhuseleke.I-alamu ye-multi-function ye-remote anti-theft alarm, i-shape elula, ikhululekile ukubamba, inokuvala imoto ngesitshixo esinye, ukukhangela imoto ekude, ukuvula i-lock ngesitshixo esinye, imisebenzi ye-alamu yokulwa nobusela.
I-automobile-level multi-functional anti-slip handle, ukuze izinga lokungaphumeleli libe sezantsi, ukuze ukuphatha kube ngcono, ukuxhathisa okuncinci, ukusebenzisana ngokupheleleyo nesiqalo sakho sokukhawulezisa.
I-EEC L3e IiNgcaciso eziMgangatho zoBuchule boBuchule
Ubunzima beCurb (Kg)
86Ah ibhetri yeLithium
20A Itshaja ekwibhodi / iiyure ezi-6 (220V)
Imisebenzi ye-CBS (iNkqubo yokuNxulumanisa iBraking)
Ngaphambili: 130/60-13 Ngasemva: 130/60-13
Nceda Qaphela ukuba lonke ulungelelwaniso lolwereferensi yakho kuphela ngokuhambelana ne-EEC homologation.
Ngaphambili: EEC L6e Ikhabhinethi yoMbane yeMoto -X5
Okulandelayo: I-EEC L7e Imoto yoThutho yoMbane yoMbane